एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति, के छ सहमतिपत्रमा ? - Chandragiri News
Home ब्रेकिंग न्युज एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति, के छ सहमतिपत्रमा ?
एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति, के छ सहमतिपत्रमा ?
२०७४, ७ फाल्गुन सोमबार २३:४५
काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार अबेरसम्म बसेको बैठकले एकताको प्रारम्भिक आधार समेटिएको एतिहासिक ७ बुँदे सहमति गरेको हो । सहमतिमा ‘पावर सेयरिङ’का विषयमा भने केहि उल्लेख गरिएको छैन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सहभागी थिए ।
सहमतिपत्रमा एमालेको तर्फबाट ओली, खनाल, नेपाल, पोखरेल र गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् भने माओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड, श्रेष्ठ र थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
Previous articleनेपाल सेकेन्ड रनरअप
Next articleअन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल : न्यू डायमण्डलाई ३-२ ले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन